Pinegrow: Editor Desktop manaitra miaraka amin'ny WordPress Integration | Martech Zone
Pinegrow: Editor Desktop manaitra miaraka amin'ny WordPress Integration
Alatsinainy, Jolay 20, 2015 Alahady, Jolay 19, 2015 Douglas Karr
Tena tsy azoko antoka fa nahita mpamoaka kaody tsara tarehy kokoa eny an-tsena noho ny pinegrow. Manome ny tonian-dahatsoratra Ovay-in-toerana fampiasa miaraka amin'ny topi-maso mialoha ny valiny. Ny tsara indrindra, pinegrow tsy manampy rafitra, layout na fomba amin'ny kaody.
Ny sasany manasongadina ny pinegrow:
fanovana - Manampia, manova, mamindra, manisy clone na mamafa ireo singa HTML.
Framework - Fanohanana ho an'ny Bootstrap, Foundation, AngularJS, 960 Grid na HTML.
Fanovana maro pejy - Manova pejy marobe miaraka. Pejy misy duplicate sy fitaratra - na dia misy ambaratonga zoom sy haben'ny fitaovana aza.
CSS Editor - Manova fitsipika CSS amin'ny fomba jerena na amin'ny kaody. Ampiasao ny mpitantana Stylesheet handahatra, hametaka ary hanala ireo styleheets.
Fanovana amin'ny Internet - Mampidira URL iray ary amboary pejy lavitra: ovao ny layout, amboary lahatsoratra sy sary, ovao ny fitsipiky ny CSS.
Layout mamaly - Mamorona layout milamina miaraka amin'ny fitaovana mpanampy ny fangatahana Media. Manampia takelaka manokana na avelao hamantatra azy ireo i Pinegrow amin'ny famakafakana ireo takelaka.
Mbola mahatalanjona kokoa aza, Pinegrow dia manana add-on WordPress ahafahanao mampiditra zavatra WordPress sy mampiseho ny atiny tena izy. Ity dia singa mahafinaritra be ho anao izay mamolavola na manitsy ny lohahevitra WordPress.
Tags: code editorOvay-in-toeranatonian-dahatsoratra phpkesikatonian-dahatsoratra wordpressFandrarian-dahatsoratra marevaka
Lalàna Spamming: fampitahana amin'i Etazonia, UK, CA, DE, ary AU
29 Oktobra 2015 à 10:09
Mampiasa Pinegrow amin'ny workflow aho ary miasa 2x haingana kokoa aho izao. Na mihoatra izany aza.
Tena fitaovana tsara izy io!
May 28, 2017 ao amin'ny 4: 48 PM
Fitiavana Pinegrow. Nahita plugins maimaim-poana ihany koa aho azonao alaina eto https://pluginsforpinegrow.com